Fundamentalism nke kere oghere? Rabbi Michael Avraham
Fundamentalism nke kere oghere?
Nzaghachi > Atiri: Nkà ihe ọmụma > Fundamentalism nke kere oghere?
Josephon Ajụrụ ya afọ 4 gara aga
Amaghị m ma ọ bụrụ na ndị rabaị anụwo banyere ihe na-eme na-adịbeghị anya na unofficial obodo nke Ba'alei Teshuvah otú ahụ ka m ga-dokwuo anya na afọ ma ọ bụrụ na ọtụtụ Ba'alei Teshuvahs n'ụdị agbahapụ nke ultra-Orthodox ndụ na Ndị ọhụrụ tọghatara adịghịdị abanye ya n'ọtụtụ akụkụ. nke dị mfe ndiife kweere na-agbasosi mfe ahịrị na halakhah na ndị ọzọ na m na-eche banyere a onu mere emegiderịta Fundamentalists kere ndị dị otú ahụ a iche iche na-emeghe obodo, m ga-asị na ọ bụ n'ihi na nke Genderless ọdịdị nke Ba'ath party na Site n'ụzọ, ọtụtụ n'ime ndị Baathist m zutere bụ okpukpe-oge a n'ụzọ ọ bụla.
Rabi nwere ike ịkọwa ihe merenụ?
Mkpado ajụjụ: ט
Nkọwa gị na-adọrọ mmasị, n'agbanyeghị na amaghị m ole ọ na-anọchi anya ya (ọ bụ n'ezie "ọtụtụ n'ime azịza azịza").
Enwere ihe nkọwa abụọ ebe a: 1. na ha na-aghọ ọgbara ọhụrụ. 2. na ha na-edobe a fundamentalist nkọwa nke halakah na nkwenkwe.
Amaghị m maka ntọala gị. Ọtọdọks nke oge a na-ejikọkwa ya na nkọwa halak nke na-agbanwe agbanwe karịa. Site na nkọwapụta, ọ dị ka ọrụ na ihe maka ndụ gị, ma ọ bụ ịgụ uri na akwụkwọ, ma ọ bụ ọrụ nka. edoghị m anya.
Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara nke a: ịmara ụwa ọzọ (enwere ihe ọzọ n'ihu ha). Ike gwụrụ nke oke-fundamentalism (mmeghachi omume na nzọụkwụ nne na nna n'otu aka, na iṅomi nnupụisi n'aka nke ọzọ). E nwere n'ezie ihe gbasara mmụọ (traumas. Ha etoghị mgbọrọgwụ na omenala ultra-Orthodox. Nne na nna ha bụkwa ndị na-achọ ụdị).
N'otu oge ahụ ha enweghị ihe nlereanya okpukpe ọzọ n'ihi na ha ghọtara secularism ma ọ bụ ultra-Orthodoxism. Ikekwe ọ bụ ya mere echiche ha banyere halakhah ji bụrụ ultra-Orthodox.
Nkọwa ndị a niile ga-ekwe omume, mana ihe omume ahụ bara uru nyocha usoro ọzọ.
Gideon Zara 4 afọ gara aga
Ọtụtụ mgbe, ikwughachi azịza adịghị eme n'ihi ọgụgụ isi, (ee, anụrụ m banyere "ndị ọkachamara" bụ ndị kwenyesiri ike na "ụkpụrụ" na "mkparịta ụka") ya mere iji uche ha mee ihe ga-eme ka a na-emegharị ajụjụ ahụ ọzọ.
mikyab Ndị ọrụ	Zara 4 afọ gara aga
Nke a bụ mkpokọta mkpokọta. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nzọụkwụ ọ bụla nke mmadụ nwere ọtụtụ ụgbọ elu, nke uche na nkà ihe ọmụma. Mana ha abụọ dị ma azụ na azịza yana na ọpụpụ na ajụjụ ahụ.
Ozizi nke ndị amamihe - Beer Hagola
Ma ugbu a ọ ga-abụ JG Gbanye Azịza nye ntuli aka
Bet Josef Lehava Gbanye Lehava ọ bụ ọgbakọ ịkpa ókè agbụrụ? (Okwu nke 484)
Tirgits Gbanye Azịza nye okwuchukwu nke ndị amamihe - Beer Hagola
N'ụzọ ezi uche dị na ya Gbanye Lehava ọ bụ ọgbakọ ịkpa ókè agbụrụ? (Okwu nke 484)
obi ụtọ Gbanye Azịza nye ntuli aka